Golaha Wasiirada oo ansixiyay xeerka xayiraada lacagaha (SAWIRRO) | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Golaha Wasiirada oo ansixiyay xeerka xayiraada lacagaha (SAWIRRO)
Golaha Wasiirada oo ansixiyay xeerka xayiraada lacagaha (SAWIRRO)
Kulan ay Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirrada xukuummadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu ansixiyay xeerka xayiraadda lacagaha oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda, kaas oo qayb ka qaadanaya barnaamijka xukuummadda ee hufnaanta iyo daah-furnaanta.
Shirka maanta oo uu shir guddoominayay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dood iyo falanqayn kadib waxa ay wasiirradu cod aqlabiyad leh ku meel mariyeen xeerkan oo dawladda u oggolaanaya in ay xayirto si loo xaqiijiyo lacagaha in waddo qaldan ay ku socdeen ama hab sharci darro ah loo isticmaalayo.
Wasiiru dawlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Cabdullaahi Xaamud Maxamed ayaa sheegay in xeerkan, oo qayb wayn ka qaadanayaa sugidda amniga, qorshaha ilaalinta hantida dadwaynaha iyo dagaalka ka dhanka ah musuq maasuqa, loo gudbinayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya si ay u meel mariyaan kadibna uu u noqdo sharci rasmi ah.
“Shirka waxaa loog hadlay dhawr qodob, Wasaaradda Maaliyadda waxa ay soo gudbisay xeerka xayiraadda lacagadaha, sidoo kale Wasaaradda Ganacsiga ayaa soo gudbisay sharciga fayadhawrka, labadaba way isku raaceen Golaha Wasiirada, kadib waxaa la ansixiyay hanaanka cadaaladda, kadib waxaan warbixin dhameystiran ka dhageysanay Wasaradda amniga iyo hay’adda socdaalka oo ah mid daba socotay soo qulqulka ajnabiga”. Ayuu yiri Wasiiru dawlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha